Samy te hanana mpiambina manokana… | NewsMada
Samy te hanana mpiambina manokana…
Par Taratra sur 08/09/2017
Lehibena mpitandro filaminana iray eto an-dRenivohitra no manana mpisava lalana rehefa mandeha, ary manana mpiambina manokana maromaro mihitsy. Mandeha fiara 4×4 ireo mpisava lalana ary manaraka avy ato aoriana ingahy lehibe. Samy mametra-panontaniana izay mahatazana hoe, fa iza iny? Izay mahalala moa, gaga fotsiny amin’ny zava-mitranga. Matetika tazana eto an-dRenivohitra izy, na tsy isan’andro aza.
Tsy ity “lehibe” ity ihany anefa no manao io fomba io, fa ny ankamaroan’izay manana fahefana eto amintsika. Maro ny manakiana fa maro loatra ny mpiambina manokana sy ny mpisava lalana ireo olom-panjakana manana fahefana. Raha oharina amin’ny any ivelany, toy ireny any amin’ny tany miady, ka atahorana mafy ny ain’ireo mpitondra fanjakana na izay manana fahefana kely eto amintsika.
Mitsetsetra ny vahoaka mitazana fa sambatra ireny mpitondra sy manana andraikitra ambony ireny fa misy mpiambina mirongo basy. Ireo vahoaka anefa mitsipozipozy tsy ampy torimaso, noho ny fitaintainana ny ho voatafika. Ny mpanafika rahateo tsy mifidy asina, fa na olona sahirana izao, manam-bola kely… efa tafihina miaraka amin’ny basy ary vonoina. “Raha sahy ialahy, tsy ireo manan-karena manana mpiambina manokana tafihina fa ny sahirana mitovy amin’ialahy ihany…”, hoy ny taim-bavan’ny efa sendra ireo jiolahy.
Fa nahoana tokoa? Inona ny lalàna mametra ny tokony ho fahefana sy ny isan’ny mpiambina ananan’ny olona manana andraikitra iray? Tsy voarakitra mazava anaty fehezan-dalana izay resaka isa izay sy ny olona manana zo hanana mpiaro manokana. Ny mpahay lalàna nanontanina milaza fa arakaraka ny andraikitra io, ary roa na iray eo ihany ny isan’ny olona tokony hiaro olona iray. Tsy izay no mitranga raha ny eto amintsika. Lasa fisehosehoana ny an’ny sasany. Raha hanampiana ny isan’ny mpitandro filaminana ireny mpiambina manokana ireny, mety hihena ny asan-jiolahy. Samy te hanana mpiambina manokana ny vahoaka madinika e!